Indlu yestudio kuMlambo iBuckhannon - I-Airbnb
Indlu yestudio kuMlambo iBuckhannon
Wamkelekile kwikhaya lethu elibekwe ecaleni kwe "Ndlela zeLizwe" kufutshane neSago, WV kumlambo obukekayo waseBuckhannon. Sizimayile nje ezi-5 ukusuka eBuckhannon, WV kunye neWV Wesleyan University. Iindawo zokuzonwabisa ezikufuphi ziquka iStonecoal Lake kunye neStonewall Jackson Lake. Indlu yesitudiyo incanyathiselwe kwikhaya lethu kwaye ivumela ukufikelela kwangasese, ngokuthe ngqo emlanjeni kwimisebenzi yamanzi. Le flethi ibandakanya ibhedi yobukhulu bokumkanikazi, isofa yokulala, ibhafu yabucala kunye neshawari kunye nendawo yokutyela enembonakalo entle yomlambo.
Ifulethi lulwakhiwo olutsha olugqityiweyo ngo-2018. Uya kuba nomnyango wakho wabucala kunye nebhokisi yokutshixa. Ikhitshi linefriji encinci, imicrowave, ikofu kunye ne-oven yetoaster. Akukho sitovu. Uya kuba nokufikelela kulwandle lwabucala emlanjeni apho unokuqubha kunye nokuloba iintlanzi. Ngexesha elifanelekileyo lonyaka, unako kwakhona kayak ukusuka kule ndawo. Awunako ukuqalisa isikhephe ukusuka kule ndawo; nangona kunjalo, kukho isikhephe sikawonke-wonke sokuphehlelelwa kude kancinane emfuleni. Nceda uqaphele ukuba nayiphi na imisebenzi yamanzi oyenzayo yenziwa ngomngcipheko wakho. Umlambo unobunzulu obahlukeneyo kunye nemisinga. Inamatye amakhulu kwaye, ukuba uthatha isigqibo sokuhamba emlanjeni, izihlangu zamanzi zicetyiswa kakhulu.
Ngokwendalo uMlambo iBuckhannon ngowona mtsalane uphambili. Igcwele i-trout ukuya phezulu emlanjeni kunye ne-muskie ezantsi. Ngaphambi kwepropati, ndibambe i-muskie ngamaxesha athile kodwa ngokuqhelekileyo i-bass yomlomo omncinci kunye ne-rock bass ekupheleni komgca. Ukuntywila ngokuhlwa emanzini kuhlala kuhlaziya emva kosuku olushushu. Eminye imitsalane ekufutshane ibandakanya iMain St. Buckhannon neevenkile zayo kunye neendawo zokutyela, iStonecoal kunye neStonewall Jackson Lakes apho unokuhamba nge kayak, ulobe kwaye ubaleke iimoto ezinkulu, iStonewall Jackson iresort kunye nezinto zayo eziluncedo kunye nepaki yesizwe yaseAudra.
Ngaphandle kokuba iindwendwe zicele uncedo olongezelelekileyo okanye ulungiso, siyakugcina umgama wethu ukuze sikubonelele ngenqanaba lemfihlo olinqwenelayo. Sinefama ephilayo kwelinye icala ledolophu ethatha ixesha lethu elihle. Siyavuya ukubulisa kwaye sixoxe ngommandla ukuba kunokwenzeka ukuba sifumaneke.
Ngaphandle kokuba iindwendwe zicele uncedo olongezelelekileyo okanye ulungiso, siyakugcina umgama wethu ukuze sikubonelele ngenqanaba lemfihlo olinqwenelayo. Sinefama ephilayo kwel…